Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya : 1aad | 2aad | | Explorations in History and Society
Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya : 1aad | 2aad |
Moment Media IQRA
Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya :
TAARIIKH: Qaybta: 1aad | 2aad |
Moment Media IQRA – 2016 – Haddaba waxaan qormadan idiinku soo koobayna dib-u-fiirin soo koobaysa Taariikhda Soomaaliyeed .Waxaan qormada ku dari doonaa tixraacyo dheeraad ah oo kabaya warbixin taariikheedka dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan cirifka bari ee Qaaradda Afrika.
Qormadan waxaan u qaybin doonaa dhawr qaybood. Qaybtan waxaan si gaar ah ugu soo qaadanaynaa siday Soomaaliya ahayd qarniyadii 19aad iyo 20aad iyo sahamadii gumaystayaasha iyo sidii la isaga caabiyey gumaysiga ilaa xorriyadii. Waana qormo koobaysa taariikhdaas dheer.
Difaacii Soomaalidii hore ee Xeebaha Soomaaliya:
Kun iyo toddoba baqol oo sano ka bacdi, markii la soo gaarey 1854, nin u dhashay dalka Britain oo layiraahdo Richard Burton oo safar ku tegey marsada Berbera, ayaa waxaa walaac ka muujiyey saraakiishii Britain ee ku sugnaa Cadan. Xilligaas werar lagu qaado donyahay maraya gacanku waxa uu aha joogto. Waxaana 1826 la diley sarkaal la oran jirey Major Gordon Laing markii uu ka soo laabtay magaalada Harar. Richard Burton buugiisa “First Footsteps in East Africa” oo uu kag asheekaynayo safarkiisii Harar, waxa uu ku qoray in markii ay isu diyaarinayeen in ay ka baxaan Berbera in la weerar, oo lag adiley nin la oran jirey Stroyan, islamarkaasna la dhaawacay John Speke iyo Burton naftiisa.
Dhammaan ma Afrikaan baa? haa ayuu yiri sarkaalkii, oo intaas raaciyey ma arkin ama “ma ogi dad carab ah oo addoon ah”,
October 1855 ayaa boqortotooyadii Ingriiska governrkiiu joogey Cadan waxa uu qabaa’ilka Soomaali ah la saxiixday in haddii la arko markab sida addoomo in markabkaas la qabto oo lala wareego isla markaasna dadka addoonta ah ee saaran la siidaayo ama la xoreeyo. Sidoo kale November 7, 1856 ayaa waxaa magaalada Berbera waxaa heshiiska ku kala saxiixday sarkaal Ingriiska u fadhiyey Cadan oo u qaablisanaa siyaasadda iyo beesha Habar Awal ee Soomaaliyeed. Qodobka 4aad ee heshiiskaasi waxa uu dhigayey in gebi ahaanba la joojiyo oo addoon la soo marsiin karin Berbera iyo gebi ahaan dhulka beesha.
Sidoo waxaa taariikhda ku cad in Soomaalidu ay qayb weyn ka ahaayeen joojinta addoonsiga laga dhoofinayo Afrika iyo Aasiya. Heshiis 17 Febraayo 1866 dhex maray Suldaan Maxamuud Yuusuf iyo sarkaalkii arrimaah siyaasadda u qaabsanaa maxmiyaddii Igriiska ee fadhiyey Cadan, waxaa heshiiskaas ku cad : In gebi ahaanba la joojiyo lana mamnuuco adoonsiga dadka looga qaadayo Afrika iyo Aasiya. Haddii la arko Markab sida addoon in la qabsado oo lala wareego oo dadka saarana la siidaayo.
Talyaanigu waxa uu 1885 bilowgiisii ayaa Talyaanigu waxa uu suldaankii Zengibar ka codsaday in uu kusoo wareejiyo degmooyinka ku yaal Koonfurta Soomaaliya. Suldaankii arrintaas waa ka diidey. Markaas ayaa Talyaanigii waxa uu yiri diidamadaasi waa ihaano la igu sameeyey, marka waa in aan ku duulo jasiiradda Zengibar. Xilligaas Seyid Saciid ma noolayn waxaana jasiirada suldaan ka ahaa wiilkiisii Barqash. Ingriiska ayaa kala dhex galay oo u dallaalay, yirina ogolow in aad dhulkaas xeebaha Soomaaliyeed siisid Talyaaniga, lagna ka qaado. markaas ayaa Seyid Barqash waxa uu talyaanigii u ogolaaday xeebahaas. (Waxaan qormada dambe ku arki doonaa sidii aay dadkii ku noolaa xeebaha Koonfureed ay isaga caabiyeeen Talyaanigii).
Furitaankii Kanaalka Zuez waxay kor u qaaday xiisahii loo qabay degaankeena Soomaaliyeed. Waayo maraakiibtii oo dhan ayaa waxay noqdeen kuwo wadadeenii soo mara. Arrintaas ayada ah waxay keentay in xoogaggii reer Yurub isku qabsadaan. Taasi waxaa ka mid ahayd waxyaabahii keenay Fadhigii Berlin ee 1884-1885 iyo Fadhigii Begium. Fadhiyadaas oo lagu qaysanayey awoodii dhulalkan looga talin lahaa. Dhulalka la qaysanayey nasiib darro waxaa ka mid noqday dhulkeena Soomaaliyeed; Saddex xoog oo shisheeye ay ayaa kala qaatay: Faransiiskii oo qaatay Jabuuti, Ingriiskiina wuxuu qaatay Woqooyi, Talyaaniguna wuxuu qaatay Koonfurta. Waxaa intaas weheliyey Boqortooyadii Itoobiya oo damac kaga jirey dalka Soomaaliya oo ayaduna ka soo sikatay dhanka Galbeedka Soomaaliya.
Boqor Cismaan: waxa Talyaanigii u soo qoray waraaq, lagu amrayo in uu hubka dhigo oo is dhiibo. Wuxuu markaas Boqor Cismaan shiriyey raggiisii oo uu weydiiyey “ma is dhiibnaa, mase weynu dagaallanaa”. Waxaa shir bil qaatay ka socdey meesha la yiraahdo Noobir, waxaana laga tashanayey arrintaas. Waxaa halkaas laga soo saaray go’aan in aysan is-dhiibayn. Markaas ayaa Talyaanigii weerar oo boqorkiina qabtay, magaalooyinkii lala dhacay madaafiic, laba sano ayaa dagaalkaasi socdey.
Qalin ku difaacii Xaaji Faarax Omaar: Waxay firfircoonidiisii si weyn u soo shac baxday wixii loo gaaray sannadkii 1920. Waxana uu biloaabay in uu Soomaaliya oo dhan u hadlo oo u noqdo abuukaato ama u doode. Isagoo ah dhallinyaro ayuu raadiyey Taarka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingriiska. markii uu helay ayuu u diray Taar ay ku qoran tahay “HAYAAY, HAYAAY, HAYAAY,”. Taarkii markuu ku dhacay wasaaradda Arrimaah dibadda Ingriiska, ayey is weydiiyeen luqaddaas, markii la arkay in uu ka yimid Hargeysa ayaa la raadiyey qof Soomaali ah oo garanaya afkaas. Waxaa markaas magaalada (London) wax Soomaali ah laga helay Caabi Faarax. Odaygii ayaa loo yeeray oo la weydiiyey macnaha kelmedaahaas in uu tarjumo, wuxuu ku tarjumay “Ayadoo aad joogtid meel mugdi ah, oo ay tahay habeen, oo hawd dherer badan oo roob iyo daruur adduunkii xiray, adiguna aad huruddo, haddii libaax halkaas bawdada ah kugu dhego oo kula booday, nin dhehi waayey ‘war iga dhiga’ ayaa waxa uu dhahaa: hayaay, hayaay, hayaay.” Markaas ayaa Ingriiskii waxay fahmeen in meeshaan wax culusi jiraan. Baarlamaankii wuxuu ku khasbanaaday in uu wafti u soo diro Hargeysa. Markii la arkay firfircoonidii Oomaar iyo inuu u doodayo dadweynaha waa la masaafuriyey, waxaana la geeyey Cadan. Dhaqdhaqaaqiisii ma damin, waxanauu sii wadey dagaal nabad ah oo uu doonayey in uu xaqa shacabka ku soo dhiciyo.Waxana uu geeriyooday 1948 isagoo weli ku jira halgankii.
Somali SYLBaraarujintii Xaaji Aaden Axmed Afqallooc: oo ahaa aftahay waxa uu furtay afkiisa si uu u baraarujiyo Soomaalida, oo tusa waxa ay midnimadu tahay. Waxana uu tirin jirey gabayo iyo suugaan uu ku guubaaniyo dadka si ay heeryada gumaysiga isaga qaadaan. Xaaji Aaden Afqallooc waxa uu geriyoodey 1986 isagoo aad uga weyn 100 sano-jir. Waxana uu Soomaalida uga tegey gabayo taariikhi ah oo Soomaalida ku tusayey waxa ay tahay Soomaalinimadu.
Maxamed Saalax Ladane oo 96-jir ah oo weli nool, kana mid ahaa raggii laf dhabarta u ahaa leegada, waxa uu Saadiq Eenow u sheegay “shan (5) nin oo keliya ayaa wax qoraal qori kara nagu jirey markii halgankaas leegada la bilaabayey, shan nin oo keliya oo la dhehi karo hebel-iyo-hebel. Laakiin dadka qalbigooda ayaa wanaagsanaa, taas oo ahayd aqoon. Laakiin maanta waxaad tihiin dad kumayaal ah oo haysta shahaadooyinka ugu sareeya.” Halkaas oo uu ku muujinayey ama ku hoga tusaalaynayey qalbig afiyow in uu wax qaban karo.
Waxaa markaas bilowday 9 sano oo ay Soomaali u dhisantay dawlad rayad ah, waxaana is bedeley saddex ra’iisul wasaare kuwaas oo mid kasta uu ka tegey taariikh culus. Cabdirashiid Cali Sharmaarke (12 Jul 1960 – 14 Jun 1964), Cabdulrasaaq Xaji Xuseen (14 Jun 1964 – 15 Jul 1967) , Maxamad Xaji Ibrahim Cigaal (15 Jul 1967 – 1 Nov 1969). Waxaa ka nool C/risaaq Xaaji Xuseen oo xilligan deggan Minneapolis.
AKHRI Qaybta 2aad…
Tixraac: Buugaagta aan tix raacnay:
A Collection of Treaties, Engagements and Sunnuds Relating to India and Nearby Countries – Turkish Arabia, Persian Gulf, Arabia and Africa … By C. U. Aitchison
The legal status of the Arabian Gulf States: a study of their treaty relations and their international problems… By Husain M. Albaharna
The blood-red Arab flag: an investigation into Qasimi piracy, 1797-1820 By Charles E. Davies
The common law abroad: constitutional and legal legacy of the British empire By Jerry Dupont
The state and rural transformation in Northern Somalia, 1884-1986 By Abdi Ismail Samatar
The new Larned History for ready reference, reading and research …, Volume 1 By Josephus Nelson Larned
Scramble for Africa… By Thomas Pakenham Afrika waxaa loo kala jarjaraysida keega (cake), qaybo ay liqeen afar dal oo xafiiltamayey – Germany, Italy, Portugal, France iyo Britain (waxaana luf-luf qaatay Spain).
Eastern African history By Robert O. Collins
Isha sawirada qaar: Wikipedia.org & Google images
Taariikhdaada marka aad taqaanid ayaad hore u socon kastaa….
Moment Media IQRA – Qaybtan waxa ay ku saabsan tahay Taariikhdii hore ee Soomaaliya oo Sheikh Saadiq Eenow kaga warbixinayo taariikhda qoran ka hor, iyo xiriiradii ay Soomaalidu la yeelatay xadaaradahii adduunka soo maray, sida xadaaraddii Masaaridii hore (faraacinadii); Giriiggii hore iyo Roomankii, arrimahaas oo muujinaya in Soomaalidu yihiin dad aad u taariikh dheer.
Markii safarkaasi ka laabtay Soomaaliya oo gaaray Masar waxay boqoradii tiri “Waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awoowayaal.” Hadalkaas oo loo daliishado in xadaaradii ka asaasantay dhulkii Masaaridii hore ay asal ahaan ka soo jeedo Soomaaliya. Waxaa taariikhdu mujinaysaa in ilbaxnimadii hore ee Masaaradii ay asal ahaan ka sooo jeedaan dhulka geeska Afrika ee Soomaalidu degto, halkaas oo ay kala tageen ilbaxnimo iyo xadaarad. Waa nasiib darro ah in taariikhdaasi ka qarsoon tahay Soomaalida, oo Soomaalidu ay yihiin dad taariikh dheer.
Xiriirkii Giriiggii hore & Roomankii iyo Soomaalida
Waagii hore dabaylaha lagu kala goosho badda ee loo yaqaan Maansoonka (Monsoon) waxaa aqoon jirey Carabta keliya iyaga oo ka faa’iidaysanaya dabaylahaas ayey Carabtu ugu kala safri jireen Afrika iyo bariga fog, waxayna u ahayd sir ay qarsan jirey oo aanay cid kale u sheegi jirin. Waxaa dhacday in nin ganacsade ah oo Giriig ah oo soo gaarey Badweynta Hindiya uu ogaadey in dadkaasi kafaa’iidaystaan dabaylaha. Ninkii markii uu ku noqday Giriigga ayuu fashiliyey sirtii Carabta ee dabaysha Monsoon-ka. Markaas ayaa Giriiggii bilaabeen in ay dabayshaas soo raacaan; waxaana markaas doonyahoodii iyo ganacsigoodii soo gaaray xeeebaha Soomaaliya oo ay xiriir la soo sameeyey Soomaalida.
Waxaa dhacday xilli lagu qiyaasay muddo 28 sano ilaa 30 sano in ay Giriigii fadhiyeen Gacanka Gardafuul (Cape Guardafui) ee cirifka bari ee Soomaaliya. Waxayna muddaddaas halkaas ka raranjireen maroodiyaal. Xilligaas Soomaaliya waxaa ka buuxey maroodiyaal. Waxaana Giriiggii ay maroodiyaashaas u adeegsan jireen dagaalladii faraha badnaa ee ay ku jireen. Waxaa dhici karta qofka hadda loo sheego in maroodiyaal laga rari jirey Soomaaliya in uu l ayaabo. Balse dhulka Soomaalida xilligaas waxa uu ahaa dhulay camireen nooc kasta oo ugaar iyo duur joog kale ah, waxaana dhulkaas waayadiidambe ku dhacay nabaad guur iyo xaaluf duurjoogtii la soo diristey.
Boqortooyadii xigtey Giriigga waxay ahayd tii Rooman-ka oo bilaabatay 44 sano ka hor dhalashii Nebi Ciise (calayhi salaam), waxayna boqortooyadiisi talada haysey ilaa 500 sano.
Waxaa taariikhda ku xusan in boqortooyadii Roomaaniyiintu ay xiriir la soo sameeyeen Soomaaliya, gaar ahaan xiriir ganacsi.
Taariikhahaasi waxay laga dheehan karaa in dadka Soomaaliyeed ay dhulkaas Geeska Afrika ee ay deganaayeen ay ku lehaayeen taariikh aad u facweyn, ahaayeen dad xadaarad leh, adduunkana uu ganacsigoodu gaaro, oo la soo macaamilay boqortooyinkii iyo xadaaradahii adduunka soo maray kuwoodii ugu faca weynaa.
Qormada xigta waxaan ku eegi doonaa xiriirkii Soomaalida iyo Xadaaraddii Islaamka ee xooggeedu jirtey 200 sano.
AKHRI Qaybta 3aad….
Faafin: Moment Media IQRA | January 1, 2016
Tixraac: Buugaagta iyo qoraallada aan tix raacnay:
Pharaohs, fellahs and explorers By Amelia Ann Blanford Edwards (Harper & brothers, 1892)
A history of ancient geography among the Greeks and Romans from the earliest ages till the fall of the Roman empire (By J. Murray, 1883)
QUEEN HATASU,AND HER EXPEDITION TO THE LAND OF PUNT
“Markii si xeeldheer loogu kuurgalay akhbaaraha taariikhdaan kusoo arooray waxaa suurta gashay in lagu jaangooyo maalinkaas waxyigu soo dagay inuu yahay maalintii Isniinta ee bisha Ramadaan ahayd 21 waqti habayn ah, waxayna waafaqsan tahay tobanka bisha August sanadka 610 ciise dabadi (10/8/610-kii ciise dabadi), cimrigii Nebiguna NNKH wuxuu maalintaas ku xaddadan yahay 40-sano oo dayax ah, lix bilood iyo 12-maalmood, taasoo u dhiganta 39-sano oo qorrax ah, sadex bilood iyo 12-maalmood.” Tixraac qormadii Sheikh Sancaani ee Silsiladda Taariikhda Islaamka.
Ayadahii u horeeyey Quraanka oo ku bilaabatay AKHRI, waxay tilmaamaysa mucjisada Qur’aanka, maadaama horumar kasta oo dunida waxa lagu gaaraa ay tahay wax akhrinta.
Aayaddu waxay xoojisey “Wax ku akhri magaca Allah” taas oo daliil u ah haddii aad Allah ka tagtid aqoontaasi waxay noqonaysaa Aqoontii uu Nebigu NNKH yiri: Allahayow waxaan kaa magan geliyaa cilmi aan wax nafac ah lahayn.
1. Wax ku akhri (Nabiyow) Magaca Eebbe ee abuuray (khalqiga). 2. Dadkana ka abuuray Calaq. 3. Akhri Eebena waa kan Sharafta lehe. 4. Ee Dadka baray sida Qalinka wax loogu qoro. 5. Dadkana baray waxayna aqoonin. (Suurad 96:1-5).
File:Califate 750.jpg Xadaaradii Islaamku meelihii ay ugu xoog weyneyd.
Bad-mareenadii Carbeed ee yimid Soomaaliya
Islaamkii markii uu hana qaaday waxaa dhacday in Carabtii ilbaxa ahayd ay aad u daneeyaan Soomaaliya. Waxaana markaas Soomaaliya yimid dal-mareeno badan oo Carbeed ama Muslimiin ah, kuwaas oo qoraallo ka sameeyey Soomaaliya. Dal-mareenadaas iyo taariikhihii ay yimaadeen Soomaaliya waxaa ka mid ahaa: Al-Yaqubi (Qarnigii 9aad ciise dabadii). Al-Mas’udi (933), Al-Istakhri (960), Ibnu Hawgal (977), Al-Barruni (1030), Al-i-drissi (1154), Yaqut (1229), Ibna Battuta (1331), Al-Harruni (1334), Ibn-Said (1344).
Bad-mareenada Carbeed ee imanayey Soomaaliya waxay muujinaysaa in Soomaalidu yihiin dad taariikh leh oo dhulkooda ay xiisaynayeen.
Ibnu Batuuta (oo ahaa nin Muslim ah oo ah reer Moroccan dadka loo yaqaan Berberiga, oo ahaa bad-mareen iyo sahamiye adduunka ku safri jirey) markii uu yimid Muqdisho sannadkii 1331 waxa uu ka qoray hadalkan: “Muqdisho waa magaalo baaxad ahaan aad u weyn oo aan la soo koobi karin. Dadkeedu waxay leeyihiin Geel farabadan oo ay maalinkasta qashaan boqollaal, waxa kale oo ay leeyihiin ido farabadan. Dadkeedu waa dad aad ugu wanaagsan ganacsiga. Waa magaalo lagu farsameeyo dharka loogu magac daray magaalada, kuwaas oo aysan jirin cid kula tartamaysa, waxaana loo dhoofiyaa ilaa Masar iyo meelo kale.”
Safarkii Zheng He ee Soomaaliya
Wadadii Xariirta (Silk Road) oo mari jirtey Soomaaliya
La soco Qaybta 3aad….
TAARIIKH NINKIIS BAA LEH Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Moment Media IQRA – Qaybta: 3aad